samsung way xishoonaysaa waxay ka saartay jaranjarada dhagaha ee qoraalka 10
Ugu Weyn Ee Wararka & Dib U Eegista Samsung way ka xishoonaysaa inay ka soo saarto qalabka taleefanka maqalka ee Note 10
Samsung way ka xishoonaysaa inay ka soo saarto qalabka taleefanka maqalka ee Note 10
Qalabka taleefanka Marar dhif ah ayay wax aad u yar ku dhex jiraan bartamaha doodaha kulul iyo doodaha muddada dheer. Muddo sannado ah ayaa laga joogaa markii Apple uu bilaabay dagaalka ka dhanka ah aaladda dhageysiga taleefanka isagoo ka saaray iphone-keeda, laakiin xitaa maanta, 2019, wali waa wax aan si joogto ah uga hadalno.
Samsung waxay ka mid ahayd shirkadihii ugu dambeeyay ee ku ilaaliya wax soo saarka analogga calankeeda oo xitaa waxay lahayd ololeyaal xayeysiin ah oo ay xaqiiqdaas ugu xoqdo wajiyada tartanka. Waxay u muuqataa, si kastaba ha noqotee, inaan mar horeba aragnay kuwii ugu dambeeyay ee xayeysiisyadan, maaddaama Samsung ay u muuqato inay seef gelisay dhabarka gadaashiisa sidoo kale. Markii hore, waxay ku bilaabatay mid aan waxba galabsan, iyada oo dekedii hore ee dugsiga laga saaray mid ka mid ah aaladaha Galaxy A. Laakiin maaddaama taxanaha ay soo bandhigayaan moodallo badan oo laga kala xusho oo ay si caddaalad ah isugu eg yihiin, cidina runti kama hadal buuq arrintaas.
Dhawaan, si kastaba ha noqotee, xogaha ku saabsan soo socda ee Galaxy Note 10 ayaa muujisay in calaamadda cusub ee Samsung ay imaan doonto iyada oo aan ku xirneyn madaxa taleefanka. Haa, dhammaan dillaacyada waxay keenaan xaqiiqda in Samsung ay ka saari doonto qalabka dhegaha. Iyo inta aan hubo in waqtiga la sii deynayo Xusuus-qorka 10-ka, Samsung waxay lahaan doontaa sharraxaad macquul-dhawaq ah oo ku saabsan sababta qalabka maqalka loo xiro, waxaan qabaa tuhun dhuumaaleysi ah shirkadda lafteeda kuma faana wixii ay sameysay.
Samsung waxay ka saareysaa qalabka taleefanka gacanta: Hoos u dhac weyn oo ku yimid taageerayaasha Note
Maxaan ku salaynayaa taas? Waa hagaag, laba shay, inta badan. Aynu ku bilowno midka ugu horreeya, oo si caddaalad ah u muuqda: Samsung waxay ogtahay inay la kulmi doonto xoogaa dhab ah oo dhab ah. Qalabkiisa Xusuusin waa taleefannada loogu talagalay dadka jecel tikniyoolajiyadda: oo ay ka buuxaan astaamo, shaashad weyn iyo xitaa S Pen oo ay tahay ama ay tahay inaanay jirin, taas oo ku xidhan cidda aad weydiinayso. Dadka haysta Galaxy Note-kii ugu dambeeyay waxay caadi ahaan hubin karaan inaysan wax gorgortan ah ka gaarin shaqeynta markii ay ka dooranayaan taleefankan casriga ah tartanka. Laakiin maya! Hadda, waa inay sameeyaan ugu yaraan hal allabari, iyo qaar ka mid ah dadka isticmaala awoodda, xitaa taasi waa mid aad u badan. Midkii ay jeclaayeen swiss-army-midda taleefanka ayaa hadda ka maqan mid ka mid ah qalabkiisa. Taleefanka hubiya sanduuqyada ugu badan ayaa hadda ka dhigaya mid faaruq ah oo faaruq ah sida qodax indhaha indhaha taageerayaasha Galaxy Note.
Qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay noqon doonaan kuwa raaligelin bixiya, iyagoo tilmaamaya waxtarka maqnaanshahan oo leh wax 'dadka badankood waxay isticmaalaan sameecadaha dhegaha la galiyo had iyo goor' si loogu caddeeyo ficilada Samsung isla markaana ay u muuqato in dharbaaxo ay ahayd inay ku dhacdo ayan ahayn mid sidaas u adag. Isla kooxdan ayaa dhaqso ugu tilmaami doonta Galaxy Buds baahiyaha maqalka ee milkiilayaasha Xusuusta 10. Laba ka mid ah taleefannada gacanta ee Samsung ee wireless-ka ah ayaa suurtogal ka noqon kara qayb ka mid ah xirmada horay loo yaqaan 'Note 10 preorder package', sida ay ahaayeen intii lagu jiray sii deynta taxanaha S10.
Hadiyad $ 130 ah ma ahan wax laga xumaado Dambiga Samsung ma noqon karaa mid aad u xoog badan oo ay ku jiraan taleefannada maqalka ee wireless ee sanduuqa Note 10 laftiisa? Taasi maahan fiditaan weyn iyadoo la tixgelinayo qiimaha aaladda sii kordheysa. Xaqiiqdiina way ka farxin doontaa ugu yaraan qaar ka mid ah taageerayaasha xanaaqsan. Xitaa sidaas oo ay tahay, taasi waa xoogaa xallinta band-ka dhibaatada. Hase yeeshe, in badan oo ka mid ah dadka isticmaala Xusuus-qorista muddada-dheer uma fadhiisan doonaan dalooladaha ama sameecadaha dhegaha la ' In kasta oo Samsung ay necbeyn laheyd inay niyad jabiso, had iyo jeer waxaa jira dhaawacyo qaar markii isbedel weyn lagu sameynayo sida tan.
Laakiin aan u nimaadno tilmaanta labaad ee ah in Samsung aysan rajeyneynin inay jabiso wararka ku saabsan daaqadda madaxa.
Meeleynta taleefanka qarsoodiga ah
Hadda, waan ogahay inay taasi wax yar tahay, laakiin i maqal! Fiiri muuqaalkan xayeysiinta ah ee la sheegayo ee loogu talagalay Galaxy Note 10 oo xaday maalmo ka hor:
Ma ku aragtaa wax aan caadi ahayn oo ku saabsan? Telefoonku wuxuu wajahayaa wado qaldan. Halkii kamaradu joogi lahayd dhinaca kore ee midig, waxay ku taal geeska bidix ee hoose. Taasi waa wax yar oo aan caadi ahayn marka la fiiriyo sawirku wuxuu muujinayaa taleefanka sida haddii looga tago miis kadib markaad dhammaystirto ka shaqaynta S Pen. Haddana marka ay sidaas tahay, waxay jiifsaneysaa waddo qaldan. Dabcan, waad ku doodi kartaa ujeedka sawirkan inuu yahay in lagu soo bandhigo kaamerada yar yar gebi ahaanba, ka dib oo dhan, waxay ahayd udub dhexaadka shaashadda rasmiga ah. Laakiin si lama filaan ah, ama laga yaabo in si ula kac ah, booskani wuxuu sidoo kale qarinayaa qaybta hoose ee taleefanka, isaga oo ka ilaalinaya diiradda xaqiiqda ah in aanu jirin jaranjarada madaxa ee laga helo halkaas.
Hadda, ka hor intaadan bilaabin inaad tilmaamto koofiyadeyda tiniska, aan si dhakhso leh u eegno sida sawirka ugu weyn ee Galaxy Note 9 u muuqdo. Hada, hadaad tagto bogga casriga ah ee samsung.com, waxaa lagugu salaamayaa sidan:
Muuqaal aad ufiican xaga hoose ee Xusuusta 9, oo soo bandhigaya booska loogu talagalay S Pen, USB Type-C dekedda iyo booska 3.5mm si loogu xiro samaacadaha aad jeceshahay. Waa hab dhakhso leh oo fudud oo lagu soo bandhigo xusuusta 9 ee korantada badan. Kaliya fiirinta sawirkan, waxaad helaysaa fikradda ah in taleefankani uu wax badan qaban karo. Dhanka kale, waxaynu ka soo qaadanay sawirka Xusuusin 10 waa maxay? Inay leedahay kamarad yar yar oo sawir qaade ah? Taasi maahan wax Xusuusnow dadka isticmaala xitaa waxay daneeyaan in badan, qaar ayaa laga yaabaa inay ka takhalusaan kamaradda hore u jeeda gebi ahaanba. Oo intaad ka saareyso saxanka dhagaha ayaa ka dhigaya Xusuusin 10 kaliya in yar oo faa'iido yar, dhibaatadu waa fariinta ay dirto: astaamaha ayaa tagaya. Adoo siinaya dadka xagalkan gadaal ah, Samsung waxay iska ilaalineysaa isbarbardhig 1: 1 fudud oo si cad u muujin lahaa farqi weyn oo u dhexeeya labada qalab ee aan u roonayn midka cusub. Taasi waa, ilaa…
Samsung waxay si dhaqso leh noogu soo jiidanaysay dhamaanteen
Xaaladaha sidan oo kale ah, aragtiyada oo dhan waa in la tixgeliyaa, xitaa haddii ay u muuqdaan kuwo aan macquul ahayn. Marka, maxaan ula jeedaa, dhab ahaan? Waa hagaag, waxaa jira suurtagalnimada in wax kasta oo kor ku qoran ay khaldan yihiin sababtoo ah fikradda bilowga ah waa khalad - midka ah in aysan jiri doonin wax taleefanka dhegaha lagu xiro ee ku yaal Galaxy Note 10. Ka dib oo dhan, sida lagu kalsoonaan karo sida ilaha qaarkood yihiin, weli waxaa jira fursad way qaldan yihiin oo waxa ay na tusayaan sax ma ahan aaladda aan ku arki doonno sii deynta rasmiga ah.
Waxaan ciyaarnay ciyaartaas sanadkii hore, markii macluumaadka ku saabsan Google Pixel 3 XL ay bilaabeen inay daadiyaan oo ay soo bandhigaan qormooyinkeeda foosha xun. Waxaa jiray aragti rajo ah oo aan noqon doonin heshiiska dhabta ah, laakiin waayaha, rasmiga Pixel 3 XL wuxuu ahaa isla taleefankii aan ku aragnay daadashada.
Waxaa laga yaabaa in aynaan arkin aakhiligii ugu dambeeyay ee taleefanka maqalka wali Laakiin taasi micnaheedu maahan in Samsung uusan mid kafiican qaban karin oo si deg deg ah switcharoo ah u muujiyo Galaxy Note oo leh dhamaan dekedaha aan jecel nahay ee aan filayno inaan aragno. Xaaladdaas markay tahay, fikradda muuqaalka la soo duubay ee aan kor ku soo sheegnay waxay noqon kartaa inay na sii hayso cirifka inta ugu badan ee suurtogalka ah, oo noo oggolaanaysa inaan ku sii xumaano hubin la'aanta soo daatay iyo wararka xanta ah. In kasta oo taasi ay tahay tallaal dheer oo macnaheedu yahay, waxay noqon doontaa ammaan si aad u aragto soo saaraha casriga ah ugu dambeyntii jiidaya mid ka mid ah suuqyadan suuqgeynta ah. Intaa ka dib, dabcan, waxaa imaan doona xayeysiis muujinaya sida Samsung ay wali ugu sii nagaaneyso run taageerayaasheeda daacadda ah isla markaana siinaysa waxay rabto oo dhammaantood adduunka ku wanaagsanaan doonaan.
Marka, xaaladdee ayaa soo bixi doonta inta lagu gudajiro soosaarida Xusuusin 10? Ma dhihi karo si hubaal ah laakiin nasiib wanaag waxaan sugeynaa kaliya dhowr toddobaad ka hor inta aan runta la soo bandhigin Ogosto 7. Ilaa iyo waqtigaas, waa inaad u badan tahay inaad dhigato noocaaga C-C ilaa 3.5 mm jack dongle meel u dhow haddiiba ay dhacdo.
widgets suuqa saamiyada ee android
galaxy s8 midabka bar navigation
Sida loo suurtogeliyo ikhtiyaarrada horumariyaha ee Android (waxay ka shaqaysaa Google Pixel, Samsung Galaxy S7, iwm)
Jabra Elite Firfircoon 65t dhego-dhegaha wireless-ka ayaa la iibinayaa kaliya $ 49.99 maanta
FCC waxay xaqiijineysaa taleefan cusub oo LG ah, oo u muuqda inuu yahay LG G4 nooca leh awood la'aanta wireless
Ka taxaddar xoqida: Galaxy S7, S7 cufan badhannada guriga ayaa aad u fudud in la waxyeeleeyo
Samsung Galaxy S8 / S8 + iyo Note 8 cusbooneysiinta ayaa ku dari doonta ikhtiyaarka wareegga shaashadda guriga
Samsung Galaxy S7 & S7 cashar ku saabsan casharka: sida loo habeeyo hababka shaashadda ee qufulka
Xaddidaadaha qarsoon ee taleefankaaga apos;
Waa tan & apos; sida loo soo dejisto oo loo rakibo iOS 10 Dadweynaha Beta / Developer Beta 2 on your iPhone ama iPad